समानुपातिक सांसद छनोटमा दलहरूभित्र असन्तुष्टि - Naya Patrika
समानुपातिक सांसद छनोटमा दलहरूभित्र असन्तुष्टि
माओवादी केन्द्रका नेताहरूमाथि हातपात – वीरेन्द्र ओली- समानुपातिकतर्फका प्रदेश सभा सदस्यको अन्तिम नाम छनोटप्रति माओवादीभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रदेश ३ का इन्चार्ज हितमान शाक्य र संयोजक झक्कुप्रसाद सुवेदीमाथि त हातपात नै भएको छ ।
शुक्रबार अपराह्न निर्वाचन आयोगमा अन्तिम नामावली बुझाउने क्रममा माओवादी केन्द्रीय कार्यालयमा नेताहरूमाथि दुव्र्यवहार भएको हो । समानुपातिक सूचीमा आफ्नो नाम पहिलो नम्बरमा भए पनि अन्तिम समयमा नेताहरूले छनोट नगरेको भन्दै सिन्धुपाल्चोकका झंक पराजुलीले शाक्य र सुवेदीमाथि हातपात गरे । ‘हामी प्रदेश ३ को बैठक सकेर शुक्रबार अपहराह्नतिर पेरिसडाँडास्थित केन्द्रीय कार्यालयको मजदुर भवनको छतमा घाम तापिरहेका थियौँ,’ संयोजक सुवेदीले भने, ‘झंक पराजुलीजी सरासर आएर हितमानजीको ज्याकेटको कलर समाउनुभयो र मोबाइल फाल्नुभयो । मेरो हातमा भएको डायरी मिल्काउनुभयो । छतको डिलमा हितमानजी र मैले झोला राखेका थियौँ, त्यो पनि भुइँमा फाल्नुभयो ।’
पराजुलीले पहिलो नम्बरमा भएको आफ्नो नाम किन हटाएको भन्दै अपशब्द प्रयोग गरेको सुवेदीले बताए । ‘मेरो पहिलो नम्बरमा भएको नाम हटाएर महेश्वर दाहालकी श्रीमतीको नाम राख्न मिल्छ भन्दै आक्रोशित हुनुभयो । महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत गराउनुपर्ने भएपछि खस–आर्यबाट १ नम्बर भए पनि समानुपातिकमा आउन सकेन,’ उनले भने ।
तर, नेता पराजुलीले आफूले अपशब्द नबोलेको र हातपात पनि नगरेको दाबी गरे । ‘हाम्रा नेताहरूले बैठक नै नबसी घाइते, अपांगता, बेपत्ता परिवारलाई नसमेटर नेताकी श्रीमती र छोरी राखेपछि झोक्किएको मात्र हुँ,’ उनले भने, ‘बाहिर आएजस्तो मैले नेताहरूलाई हातपात र अपशब्द केही नबोलेको छैन ।’ नेताहरू अभिभावक नभई परिवारवादमा फसेर समानुपातिक नाम छनोट गरेकाले पार्टीको आधिकारिक निर्णय हेर्न झोला हेरेको उनले दाबी गरे ।
अरू प्रदेशमा असन्तुष्टि भए पनि प्रदेश ३ को जस्तो बाहिर छताछुल्ल हुन पाएन । माओवादीबाट प्रदेश सभातर्फ समानुपातिकमा नेताको छोराछोरीदेखि श्रीमतीसम्म परेका छन् ।
माओवादीमा प्रदेश सभातर्फको समानुपातिकमा केही नेताका आफन्त परेका छन् । प्रदेश ३ बाट खस–आर्य महिला कोटामा झक्कु सुवेदीकी छोरी भावना सुवेदी परेकी छिन् । प्रदेश ३ बाटै प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष महेश्वर दाहालकी श्रीमती सीता अधिकारी खस–आर्य महिला कोटाबाट सूचीमा परेकी छिन् । माओवादीका अर्का नेता दिलीप प्रजापतिकी श्रीमती प्रतिमा श्रेष्ठ जनजाति कोटाबाट समानुपातिक सूचीमा परेकी छिन् ।
प्रदेश ६ बाट पूर्वविद्यार्थी नेता रामदीप आचार्यकी श्रीमती कृष्णा शाह, महिला जनजाति कोटाबाट सुर्खेत जिल्ला इन्चार्ज नरबहादुर विष्टकी श्रीमती पुष्पा घर्ती विष्ट, नेता जनार्दन शर्माकी बुहारी विमला केसी खस–आर्य महिला कोटाबाट समानुपातिकमा परेकी छिन् ।
कांग्रेसमा पौडेल पक्षले जनायो असहमति
रमेश सापकोटा – बन्दसूचीको प्राथमिकता क्रमअनुसार सूची बुझाए पनि कांग्रेसलाई प्रदेश सभाका ७२ सदस्यको अन्तिम नामावली टुंग्याउन शुक्रबार निकै सकस पर्‍यो । मध्यरातसम्म चलेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा सर्वसम्मति हुन नसक्दा सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमतका आधारमा आयोगमा सूची बुझाउन पठाएको आरोप नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले लगाएको छ ।
शुक्रबार आयोगमा नाम बुझाउनैपर्ने भएपछि देउवाले ‘माइन्युट’ नै नसुनाई केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई सूची दिएर निर्वाचन आयोगमा पठाएका थिए । ‘बैठक बस्यो, तर प्रदेश सभाका सांसदलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा सहमति हुन सकेन । बहुमतको हिसाबले सभापतिले एकलौटी निर्णय गर्नुभयो,’ समिति सदस्य बलबहादुर केसीले भने, ‘प्रदेश सभामा क–कसलाई सांसदको सूचीमा राखियो भन्ने जानकारी पनि पाउन नसकेपछि उपस्थितिपुस्तिकामा रामचन्द्रजी, प्रकाशमान सिंह र मैले हस्ताक्षर गरेनौँ ।’ यसअघि मनोनीतबाट सांसद बनेकी चितवनकी गीता वाग्लेलाई यसपटक फेरि प्रदेश सभा सांसद बनाइएको भन्दै नेता पौडेल सबैभन्दा असन्तुष्ट बनेका थिए ।
मुख्यसचि पौडेल सूची लिएर पुगे निर्वाचन आयोग
बैठकमा सभापति देउवाले नाम टुंगिएको घोषणा गरेपछि केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । तर, नेता डा. रामशरण महतसहितका नेताले बालुवाटारमै बसेर दबाब दिएपछि देउवाले माइन्युट पढेर सुनाएको एक नेताले जानकारी दिए । बन्दसूचीमा पनि सभापति देउवाले एकलौटी गरेको भन्दै समिति सदस्य अर्जुननरसिंह केसीसहितका नेता असन्तुष्ट बनेका छन् । प्रदेश ३ बाट सांसद टुंग्याउने नाममा आफूहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरेको भन्दै केसीसहितका नेता असन्तुष्ट बनेका थिए ।
यसअघि बुझाइएको बन्दसूचीको क्रमअनुसार नै समावेशी कोटाअनुरूप आयोगमा नाम बुझाउनुपर्ने भए पनि कम प्रतिनिधित्व भएका क्लस्टरका केही नाममा संस्थापन पक्षले आफ्नो पक्षका नाम पार्न खोजेपछि समस्या आएको एक नेताले जानकारी दिए । कांग्रेसले प्रदेश १ बाट १३, २ बाट ११, ३ बाट १४, ४ बाट ९, ५ बाट १२, ६ बाट ५ र ७ बाट ८ गरी ७२ प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसदको सूची आयोगमा बुझाएको हो ।
आयोगको परिपत्रले केही जटिलता देखियो : खाण
कांग्रेस सभापति देउवानिकट नेता बालकृष्ण खाणले पार्टीभित्र विवादभन्दा पनि निर्वाचन आयोगको ऐन र परिपत्रको व्याख्याबारे छलफल भएपछि केही जटिलता देखिएको जानकारी दिए । ‘बन्दसूचीमा रहेका नामलाई क्रमसंख्याअनुसार आयोगले पठाऊ भनेको थियो, तर ऐनमा यथासम्भव क्रमसंख्या मिलाउने भन्ने भएपछि अलि फरक देखियो,’ खाणले भने, ‘यसबारेमा पार्टीमा हेरफेर गर्न सकिने विषय पनि उठ्यो, तर आयोगको निर्देशिकाअनुसार नै हामीले नाम पठाएका छौँ ।’
२२० जनाको नाम दिइएपछि नेताहरू असन्तुष्ट
प्रदेश सभाका ७२ जनाको सूचीको सट्टा बैठकमा २२० जनाको सबै नाम दिइएपछि नेताहरू असन्तुष्ट भएका थिए । ‘नामसमेत सुनाएनन्, भनेनन्, सुनाउन पनि तयार भएनन् । हामीले नामसमेत सुन्न नपाउने र नेताहरूले कोठामा बसेर आफूखुसी गरेपछि असन्तुष्टि राखेका हौँ,’ एक नेताले भने, ‘पार्टी यसरी एकलौटी रूपले चलाउँदा आज हामी यसरी नराम्ररी हार्नुपर्‍यो । सरकार र पार्टी चलाउँदा लोकतान्त्रिक पद्धति होइन, मुखियाजस्तो गरी चलाइएपछि यस्तो हुँदा समेत पार्टी चेतेन ।’ विमलेन्द्र निधि, बालकृष्ण खाण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा. प्रकाशरण महतले अलग्गै कोठामा बसेर निर्णय गरेको भन्दै पौडेल पक्षका नेताहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् । यसअघि समानुपातिकबाट सांसद भइसकेका नेतालाई नदोहोर्‍याउने पार्टी निर्णयविरुद्ध केहीलाई सांसद बनाउन खोजिएको भन्दै नेता रामचन्द्र पौडेल बैठक नै छोडेर हिँडेका थिए ।
हस्ताक्षरसँगै केसीको असहमति
नेता अर्जुननरसिंह केसीले उपस्थितिपुस्तिकामा हस्ताक्षर गरे, तर निर्णयप्रति असहमति जनाए । ‘निर्णयप्रति असहमत छु भन्दा पनि माइन्युट दिएनन् । बिहान ८ बजे नै बोलाइयो, एक घन्टा खाना खाने समयपछि छलफल गरियो, तर प्रदेश सभामा को–को परे, जानकारी दिइएन,’ केसीले भने, ‘सभापतिलाई आफ्नो विचार दिएर जाउँ भन्दा माइन्युट नै हेर्न दिएनन्, यस्ता पनि कहीँ हुन्छ ?’
कांग्रेसमा प्रदेश १ बाट समानुपातिकमा परेकी नवोदिता चौधरी पूर्वअञ्चलाधीश नरेन्द्र चौधरीकी छोरी हुन् । राप्रपाका चौधरी एक वर्षअघि कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए । कांग्रेस प्रवेश गरेको एक वर्षमै उनले छोरीलाई प्रदेश सभा सदस्य बनाउन सफल भएका छन् ।
प्रदेश १ बाट खस–आर्य महिलामा पहिलो नम्बरमा परेकी शान्ता पौडेलको नाम काटिएको छ । उनको सट्टामा कांग्रेसले खस–आर्य महिलाको तेस्रो क्रममा रहेकी सीतादेवी पौडेललाई प्रदेशको समानुपातिक सूचीमा पारेको छ ।
प्रदेश २ बाट सूचीमा परेकी प्रमिलादेवी दास ०७० मा समानुपातिक सांसद थिइन् । सरस्वती चौधरी यसअघि सांसद भइकेकी छिन् । प्रदेश २ को धनुषाबाट सांसद बनेका शिवचन्द्र चौधरी निर्वाचनअघि मालेबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए । नेता विमलेन्द्र निधिले चुनाव जित्ने गरी चौधरीलाई पार्टीमा भित्राएका थिए ।
सभापति देउवाले माइन्युट हेर्नसमेत दिएनन् : केसी
नेता अर्जुननरसिंह केसीले उपस्थितिपुस्तिकामा हस्ताक्षर गरे, तर निर्णयप्रति असहमति जनाए । ‘निर्णयप्रति असहमत छु भन्दा पनि माइन्युट दिएनन् । प्रदेश सभामा को–को परे, जानकारी दिइएन,’ उनले भने, ‘सभापतिलाई आफ्नो विचार दिएर जाउँ भन्दा माइन्युट नै हेर्न दिएनन्, यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ?’ अर्का नेता बलबहादुर केसीले पनि देउवाले एकलौटी निर्णय गरेको बताए । ‘प्रदेश सभामा क–कसलाई सांसदको सूचीमा राखियो भन्ने जानकारी पनि पाउन नसकेपछि उपस्थितिपुस्तिकामा रामचन्द्रजी, प्रकाशमान सिंह र मैले हस्ताक्षर गरेनौँ,’ उनले भने ।
राजपा कार्यालय तोडफोड छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति
समानुपातिक उम्मेदवार छनोटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको बबरमहलस्थित केन्द्रीय कार्यालय नै तोडफोड गरिएको छ । शुक्रबार भएको तोडफोडबारे छानबिन गर्न राजपाले उपाध्यक्ष गोविन्द चौधरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिले तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ । दोषी पत्ता लागेपछि कारबाहीको सिफारिस गर्ने समिति सदस्य केशव झाले बताए ।
राजपाले शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सूचीमा आफ्नो नाम नपरेपछि विनोद सिंहले कार्यालय तोडफोड गरेका हुन् । सिंहको नेतृत्वमा आएका १५–२० जनाले भवनको बोर्ड, झ्यालढोका तोडफोड गरी कुर्सीसमेत फालेका थिए । प्रदेश २ मा समानुपातिकतर्फ राजपाले पाएको १० सिटमा सिंहको नाम परेको छैन । निजामती कर्मचारीबाट राजीनामा दिएका उनको नाम प्रदेश सभामा समानुपातिक सूचीमा थियो । मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चको पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका सिंहले नै राजपाको केन्द्रीय कार्यालय मञ्चको भवनमा सारेका हुन् । उनले समानुपातिकमा नाम पार्न सरकारी भवन पार्टीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए ।
राजपाले समानुपातिकमा बबिता चौधरी, नीलमदेवी भूमिहारी, अञ्जु कुमारी, पुनम यादव, विभा ठाकुर, डिम्पल झा, रामनरेश राय, जानकीशरण साह, रामप्रवेश बैठा र लैला खातुनको नाम आयोगमा पठाएको छ । डिम्पल राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनिल झाकी पत्नी हुन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवकी बुहारी पनि प्रदेश सांसद
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवकी बुहारी प्रमिलाकुमारी यादव पनि समानुपातिक सांसद बन्ने भएकी छिन् । माओवादीले उनलाई प्रदेश २ बाट मधेसी महिला कोटामा समेटेको छ । प्रमिला प्रमुख आयुक्त यादवका जेठा छोरा अशोककी पत्नी हुन् । अशोक माओवादीका स्थानीय कार्यकर्ता भए पनि प्रमिला राजनीतिमा सक्रिय थिइनन् । बन्दसूचीको क्रमअनुसार नै समावेशी कोटाबाट नाम बुझाउनुपर्ने भए पनि कम प्रतिनिधित्व भएका क्लस्टरका केही नाम तलमाथि भएको एक नेताले बताए ।
१४ पूर्वसांसद समानुपातिकबाट प्रदेश सभामा
एमाले : पूर्वसांसदहरू उषाकला राई, यशोधा अधिकारी र शान्ति थिङ समानुपातिकतर्पmबाट प्रदेश सभा सदस्य बन्दै छन् ।
कांग्रेस : मालेबाट यसअघि सांसद रहेका शिवचन्द्र चौधरी कांग्रेस प्रवेश गरी प्रदेशको सांसद बन्दै छन् । त्यस्तै, पूर्वसांसदद्वय सरस्वती चौधरी र प्रमिलादेवी दास पनि छनोट भएका छन् । यसअघि दोस्रो संविधानसभामा मनोनीत २६ भित्र परेकी गीता वाग्ले र अखण्ड नेपाल पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका पूर्वसांसद कुमार खड्का पनि सांसद बन्दै छन् ।
माओवादी : माओवादीले पूर्वसांसदहरू सीताकुमारी नेपाली, दामाकुमारी शर्मा र विमला केसीलाई प्रदेश सभा सदस्य बनाउँदै छ ।
राजपा : राजपाले समानुपातिकतर्फ पूर्वसांसदद्वय डिम्पल झा र रामनरेश रायको नाम छनोट गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ ।
फोरम: संघीय समाजवादी फोरमबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रदेश सभामा एकजना पूर्वसांसदले प्रतिनिधित्व गर्दै छन् । प्रदेश २ मा फोरमले पूर्वसांसद करिमा वेगमलाई सांसद बनाउँदै छ ।
एमालेभित्र समानुपातिक उम्मेदवार छनोटमा त्यति ठूलो विवाद देखिएको छैन । तर, वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य कर्णबहादुर थापाले भने नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनको नाम प्रदेश ७ बाट समानुपातिक सूचीको १ नम्बरमा थियो । उनी मुख्यमन्त्रीको दाबेदार पनि थिए । तर, प्रदेश ७ बाट सबै महिला मात्रै छनोट भए । ‘पार्टी स्थायी कमिटीले मर्यादा विष्टलाई कञ्चनपुर १ (ख) बाट उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको भए समानुपातिकमा मेरो नाम पर्ने निश्चित थियो । २० निर्वाचन क्षेत्रभित्र एकजना पनि महिला नपारिनुले मलगायत अन्य जिम्मेवार कमरेड पनि प्रदेश ७ को विकास र समृद्धिमा योगदान गर्नबाट वञ्चित पारिएका छन् । यस परिणामले प्रदेश ७ ले सर्वस्वीकार्य नेतृत्व नपाउने लगभग निश्चित भएको छ । पार्टी निर्णयको उल्लंघनबाट परेको र पर्ने नकारात्मक प्रभावको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिले लिनुपर्दछ । सबै प्रकारका जालझेल, षड्यन्त्र अन्त्यका लागि आजसम्म लडेर आइएको छ र यो लडाइँ जारी रहनेछ,’ थापाले फेसबुकमा असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
#असन्तुष्टि #माओवादी केन्द्र